दसैँमा ​कस्तो खसीको मासु खाने ? - ज्ञानविज्ञान
दसैँमा ​कस्तो खसीको मासु खाने ?
खसीको शारीरिक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । किन्न आँटेको खसी–बोकालाई बाँधेको ठाउँबाट फुकाउनुहोस र हल्का धपाएजस्तो गरेर हिँड्न लगाउनुहोस । फुर्तिलो, छुँदा बुरुक्क उफ्रिने, चलमलाउने हुनुपर्छ । आँखामा चिप्रा आएको, नाकबाट सिंगान बगिरहेको खसी–बोका किन्नेतिर लाग्दै नलाग्नुहोस । त्यसैगरी रौँ झुस्स भएको खसी पनि स्वस्थ हुँदैन । गोटा परेको जुत्तो गरेको छ भने निरोगी भएको बुझ्नुपर्छ । पुच्छर आसपासमा छेरेको लतपतिएको देखिएमा खसी–बोका रोगी छ भन्ने जान्नुपर्छ ।
Topics #दसैँ #मासु
Don't Miss it कुन छालालाई कस्तो रङको ड्रेस सुहाउँछ ?
Up Next शास्त्र अनुसार कस्ता ब्यक्तिलाई अभागी भनिएको छ ?
यस्ता खानेकुराले हामीलाई मुटुसम्बन्धी रोगबाट जोगाउछ
धेरै मानिस मुटुसम्बन्धी रोगग्रस्त हुन थालेका छन् । यस्ता खानपान र जीवनशैलीले हामीलाई मुटुसम्बन्धी रोगबाट जोगिन सघाउँछन् । मसलाजन्य ताजा…
खाली पेटमा पानी पिउनुको यी फाइदाहरु तपाईलाई थाहा छ त
हामी प्राय बिहान चिया पिउने गर्छौं । तर यसो गर्नु गलत हो । खाली पेटमा हामीले पानी पिउने गर्नुपर्छ ।…
हेपाटाइटिस रोग के हो ? लक्षणहरु र उपचार
हेपाटाइटिस भाइरस द्वारा हुने सरुवा रोग हो।यस रोगले मानिसको कलेजोमा असर गर्दछ।अन्य मौसम भन्दा बर्षातको समयमा बढी देखा पर्दछ।यसको बेलैमा…
अभिभावकको समस्या : बच्चा घरबाट निस्किदैनन्, मोबाइल बन्दैछ घातक समस्या
पहिलेको पुस्तामा साना बच्चालाई घरबाहिर धेरै खेल खेल्यो भनेर कठालोमा समातेर घरभित्र ल्याइदैछ । बच्चाले घरभित्र भन्दा घरबाहिर बढी समय…
तपाईको हात–खुट्टा निदाउँछ ? यस्तो छ कारण
कहिलेकाँही हामी हाम्रो हात–खुट्टा निदाएको अनुभव गर्छौ । त्यतिबेला हामिलाई एकछिन उभिन र हिड्न गाह्रो हुन्छ । तर, हामिलाई किन…